1Ki 20 | Shona | STEP | Zvino Bhenihadhadhi, mambo weSiria, wakakoka hondo dzake dzose; iye waiva namadzimambo ana makumi matatu ana maviri, namabhiza, nengoro pamwechete naye; akaenda, akakomba Samaria, akarwa naro.
Kurwa pakati paAhabhi naBhenihadhadhi, mambo weSiria
1 Zvino Bhenihadhadhi, mambo weSiria, wakakoka hondo dzake dzose; iye waiva namadzimambo ana makumi matatu ana maviri, namabhiza, nengoro pamwechete naye; akaenda, akakomba Samaria, akarwa naro. 2Akatuma nhume kuna Ahabhi, mambo waIsiraeri, mukati meguta, akati kwaari, "Zvanzi naBhenihadhadhi 3Sirivha yako nendarama yako ndezvangu, navakadzi vako navana vako vakanaka ndavangu.' "
4Mambo waIsiraeri akapindura, akati, "Ndizvo hazvo zvamareva, ishe wangu mambo; ndiri wenyu, nezvose zvandinazvo."
5Nhume dzikadzoka, dzikati, "Zvanzi naBhenihadhadhi, `Ndakatuma shoko kwauri,' ndikati, `Unofanira kundipa sirivha yako nendarama yako, navakadzi vako navana vako; 6asi ndichatuma varanda vangu kwauri mangwana nenguva ino; ivo vachanzvera imba yako, nedzimba dzavaranda vako; zvino, zvose zvinofadza meso ako vachazvitora namaoko avo, ndokuenda nazvo.' "
7Ipapo mambo waIsiraeri wakadana vakuru vose venyika, akati, "Cherekedzai, muvone, kuti munhu uyu unotsvaka kutiitira zvakaipa; nokuti wakatuma shoko kwandiri, achiti uchatora vakadzi vangu navana vangu, nesirivha yangu nendarama yangu, ndikasamurambira chinhu."
8Ipapo vakuru vose navanhu vose vakati kwaari, "Regai kumuteerera, kana kumutenda."
9Naizvozvo akati kunhume dzaBhenihadhadhi, "Udzai ishe wangu mambo, muti, `Zvose zvakazivisa muranda wenyu pakutanga, ndichazviita; asi chinhu ichi handingagoni kuchiita.' " Nhume dzikaenda, dzikadzokera kwaari nemhinduro. 10Ipapo Bhenihadhadhi akatuma shoko kwaari akati, "Vamwari ngavandirove, varambe vachidaro, kana guruva reSamaria rikagona kuringana kuti vanhu vose vanonditevera vatsamure tsama namaoko avo."
11Mambo waIsiraeri akapindura, akati, "Muudzei muti, `Unoshonga nhumbi dzake dzokurwa ngaarege kuzvirumbidza saiye wodzibvisa.' "
12Zvino iye wakati achinzwa shoko iro ari pakunwa, iye namadzimambo, pamisasa, akati kuvaranda vake, "Rongedzai!" Ivo vakarongedza kundorwa neguta.
13Zvino mumwe muporofita akaswedera kuna Ahabhi mambo waIsiraeri, akati, "Zvanzi naJehovha, `Waona vanhu ava vazhinji here? Tarira, ndichavapa mumaoko ako nhasi, ugoziva kuti ndini Jehovha.' "
14Ahabhi akati, "Naniko?" Iye akati, "Zvanzi naJehovha, `Namajaya amachinda amativi enyika.' " Iye akati, "Ndianiko unofanira kuvamba kurwa?" Akapindura akati, "Iwe!"
15Ipapo akaverenga majaya amachinda amativi enyika, vakasvika mazana maviri namakumi matatu namaviri; zvino akaverenga vanhu vose, ivo vana vaIsiraeri vose, vakasvika zviuru zvinomwe.
16Vakasimuka masikati makuru. Zvino Bhenihadhadhi wakanga ari pakunwa pamisasa, akabatwa, iye namadzimambo, iwo madzimambo makumi matatu namaviri akanga achimubatsira.
17Zvino majaya amachinda amativi enyika akatanga kutungamira Bhenihadhadhi akatuma nhume, vakamuudza, vachiti, "Kuna varume vanobuda Samaria." 18Iye akati, "Kunyange vabuda vachitsvaka rugare, muvabate vari vapenyu, kunyange vabuda vachitsvaka kurwa, muvabate vari vapenyu."
19Naizvozvo vakabuda muguta, iwo majaya amachinda amativi enyika nehondo yakavatevera.
20Mumwe nomumwe akauraya munhu wake, vaSiria vakatiza, vaIsiraeri vakavateverera; naBhenihadhadhi mambo weSiria akatiza, akatasva bhiza ana vamwe vakanga vakatasva mabhiza. 21Ipapo mambo waIsiraeri akabuda, akaparadza mabhiza nengoro, akauraya vaSiria vazhinji-zhinji. 22Zvino muporofita akaswedera kuna mambo waIsiraeri, akati kwaari, "Enda undozvisimbisa, uchenjere, ufunge zvakanaka zvaunofanira kuita; nokuti kana gore rapera mambo weSiria uchauya kuzorwa newe."
23Zvino varanda vamambo weSiria vakati kwaari, "Mwari wavo ndimwari wamakomo, nemhaka iyo vakatikunda; asi ngatirwe navo pabani, ipapo zvirokwazvo tichavakunda. 24Naizvozvo itai chinhu ichi, Mubvise madzimambo, mumwe nomumwe panzvimbo yake, mugoisa vatariri vehondo panzvimbo yavo; 25mugozviunganidzira hondo yakafanana nehondo yamakarashikirwa nayo, bhiza panzvimbo yebhiza, nengoro panzvimbo yengoro, tirwe navo pabani; zvirokwazvo tichavakunda." Iye akateerera inzwi ravo, akaita saizvozvo. 26Pakupera kwegore Bhenihadhadhi akaunganidza vaSiria, akaenda Afeki kundorwa navaIsiraeri. 27Vana vaIsiraeri vakaunganidzwawo, vakapiwa mbuva, vakandorwa navo; vana vaIsiraeri vakadzika matende avo pakatarisana navo, vakafanana namapoka maduku maviri embudzi, asi vaSiria vakanga vakazadza nyika.
28Zvino munhu waMwari akaswedera, akataura kuna mambo waIsiraeri, akati, "Zvanzi naJehovha, `VaSiria zvavakati, Jehovha ndimwari wamakomo, asi haazi mwari wamapani, naizvozvo ndichapa vanhu avo vose mumaoko ako, vazive kuti ini ndiri Jehovha.' "
29Zvino vakagara pamisasa vakatarisana mazuva manomwe. Nomusi wechinomwe vakasangana vakarwa, vana vaIsiraeri vakauraya vaSiria vaifamba namakumbo vane zviuru zvine zana nomusi mumwe. 30Asi vamwe vakatizira muguta reAfeki, rusvingo ndokuwira pamusoro pavarume vane zviuru zvina makumi maviri nezvinomwe vakanga vasara. NaBhenihadhadhi akatizawo, akasvika muguta, akapinda mukamuri yomukati. 31Ipapo varanda vake vakati kwaari, "Tarirai zvino, takanzwa kuti madzimambo eimba yaIsiraeri madzimambo ane nyasha; zvino ngatisunge magumbu pazviuno zvedu namakavi pamisoro yedu, tibudire kuna mambo waIsiraeri; zvimwe uchakuregai muri vapenyu." 32Naizvozvo vakasunga magumbu pazviuno zvavo, namakavi pamisoro yavo, vakaenda kuna mambo waIsiraeri, vakati, "Zvanzi nomuranda wenyu Bhenihadhadhi, `Ndinokumbira kuti murege kundiuraya henyu.' " Akati, "Uchiri mupenyu here? Iye ihama yangu." 33Zvino varume avo vakacherekedza kwazvo, vakakurumidza kugamuchira shoko iro kwaari, vakati, "Hoyo, Bhenihadhadhi hama yenyu." Ipapo iye akati, "Endai, mumutore." Bhenihadhadhi akabudira kwaari, akamukwidza pangoro. 34Zvino Bhenihadhadhi akati kwaari, "Ndichadzosa maguta akatorerwa baba vako nababa vangu; ungazviitira migwagwa muDhamasiko, sezvakaita baba vangu paSamaria." Ahabhi akati, "Ini ndichakutendera kuenda nokuda kwesungano iyi." Naizvozvo akaita sungano naye, akamutendera kuenda.
35Zvino mumwe murume wavana vavapomfita akati kushamwari yake arairwa naJehovha, "Ndirove hako." Murume akaramba kumurova. 36Ipapo akati kwaari, "Zvausina kuteerera inzwi raJehovha, tarira, uchaurawa neshumba kana uchangobva kwandiri." Zvino wakati achangobva kwaari, shumba ikamuwana, ikamuuraya.
37Zvino akawanazve mumwe murume, akati, "Ndirove hako." Murume uyo akamurova, akamukuvadza kwazvo. 38Naizvozvo muporofita akabva, akandomirira mambo panzira, akazvishandura nomucheka waakanga asunga kumeso kwake. 39Zvino mambo wakati achipfuura, akadanidzira kuna mambo, akati, "Muranda wenyu wakanga apinda pakati pokurwa, ndikaona munhu achitsauka, akauya kwandiri nomumwe murume, akati, `Rinda munhu uyu; kana akatongoshaikwa, upenyu hwake huchatsihwa noupenyu hwako; kana izvo zvikakona, uchafanira kuripa netarenda resirivha.' " 40Zvino muranda wenyu wakati achibatabata hake pano napapo, iye akanyangarika. Mambo waIsiraeri akati kwaari, "Ndizvo zvauchatongerwa, wazvitonga umene." 41Akakurumidza kubvisa mucheka kumeso kwake, mambo walsiraeri akamuziva kuti ndomumwe wavaporofita. 42Iye akati kwaari, "Zvanzi naJehovha, `Zvawatendera munhu kupukunyuka pamaoko ako, iye wakanga atukwa neni kuti aparadzwe, naizvozvo upenyu hwake hwuchatsihwa noupenyu hwako, uye vanhu vake vachatsihwa navanhu vako.' "
43Mambo waIsiraeri akaenda kumba kwake awora moyo ane shungu, ndokusvika paSamaria.